Rita, Writing for My Sake!: အညာ၊ အမေ၊ စာပေ နဲ့ လူကြီးဆရာ
Posted by Rita at 5/08/2011 04:45:00 PM
ပြောလို့လည်း အကျိုးမရှိ၊ မပြောလို့လည်း အကျိုးမရှိ (ရှိတာမရှိတာ ဘယ်လို ရွှေဉာဏ်တော်နဲ့ တိုင်းသလဲတော့ မသိရ) တာတွေ မပြောသော၊ ပြဿနာကို လိုက်မရှာတတ်သဖြင့် အလွန်တရာမှ နှစ်လိုဖွယ် အေးချမ်းသောဘဝကို ပိုင်ဆိုင်လေခြင်းဟု တိုက်ရိုက်တဲ့တိုးမပြော တခြားနည်းနဲ့ ကွေ့ဝိုက်ပြောတတ်သူများနှင့် သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်ပါက အလွန်တရာမှ ဝမ်းမြောက်စရာဟု ခံယူပါမည်။ (နောက်တာနော် နောက်တာ =D)
လည်အောင် ရေးတတ်တာ သိပ်သဘောကျတာပဲ ဘတ်ပြီးတော့ ဘာမှ နားမလည်တော့ဘူး
အဲဒီပွဲ မသွားခဲ့ရတဲ့သူတွေ ဖတ်ရင်တော့ လည်မှာမဟုတ်ဘူး။
အော်... အဲဒီပွဲ မသွားဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဟုတ်ကဲ့ လည်ပါတယ် ( :rotation: )..
Ye Nyi Win said...
မရီတာ comments ထားတာတွေ သဘောကျသဗျို့။ ကျွန်တော်လည်း ဦးအောင်သင်းကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။
၁ ပွဲလုံးမှာ ၂ ချက်ပဲ မှတ်မိတယ်
to kno all is to forgive all ရယ်
၅ စက္ကန့်လောက် ပြန်စဉ်းစားဖို့ရယ်။
ဟောင်းတူလာရှင် လည်း မှတ်မိတယ် XD
ဆရာမ ခင်ခင်ထူးက အရေးပိုကောင်းပြီး၊ ဆရာ နေ၀င်းမြင့်က အပြော ပိုကောင်းတယ်။ ဆရာချစ်စံဝင်းက အပြောထက် အရေးပိုကောင်းတယ်။ ဆရာဖေမြင့်ပြောသွားတာ နားထောင်ရတဲ့အခါ သူ့စာတွေ ဖတ်ရသလိုပဲ ခံစားချက်ရတယ်။
ဆရာအောင်သင်းကတော့ သူ့စာတွေအတိုင်း ပွင့်ပွင်လင်းလင်း ဒိုးဒိုးဒေါက်ဒေါက် ပြောသွားတာ။ အသက်အကြီးဆုံး... အဟောအပြောလည်း အကောင်းဆုံးပဲ။
Truely wish to read your points to those (Saya & Sayana) and convenors.
Truely wish your points to see them (Saya & Sayama). Good !